4 siyaabood oo aad ugu guuri karto Yurub adoon kharash badan ku bixin
Bogga horeNolosha Ku hadla
Yuri Vilensky Co-founder of the Hello Move migration platform. Wuxuu caawiyay 250 qof inay u guuraan dibadda.
Si aad si sharci ah ugu degganaato dibadda in ka badan 90 maalmood oo isku xigta, waa in aad heshaa sharci degenaansho ku meel gaar ah (ogolaansho degenaansho). Dambe waa la kordhin karaa oo, natiijadu, waxay helaysaa ogolaansho joogitaan joogto ah (degaansho joogto ah) iyo xitaa dhalashada waddan shisheeye.
Waxaa jira fursado kala duwan oo lagu heli karo ogolaanshaha joogitaanka. Qaarkood waa kuwo aad u adag. Tusaale ahaan, dukumeenti waxaa lagu soo saari karaa Ruqsadaha Deganaanshaha / Ganacsiga Giriiga ee maalgashiga hantida maguurtada ah ee dalka lacag badan, celcelis ahaan laga bilaabo 250,000 euro (ku dhawaad ​​​​21 milyan oo rubles). Dabcan, qof kastaa ma awoodi karo. Iyo sidoo kale guursashada ajnabiga, dib u midoobida lamaanaha dibadda ama helitaanka deganaansho rasmi ah sababtoo ah xididdada qowmiyadeed.
Sidaa darteed, waxaanu falanqeyn doonaa fursadaha xiisaha badan ee ay heli doonaan tiro badan oo dad ah.
1. fiisaha bilowga
Doorasho xiiso leh oo aad u guurto ganacsigaaga dibadda ama aad bilowdo mashruuc cusub.
Yaa u ah
Loogu talagalay ganacsatada qaangaarka ah ee leh fikrad cusub oo bilow ah iyo tusaalaha shaqada. Musharrixiintana waa inay lahaadaan raasamaal-bilowga (badanaa dhowr mushahar oo nolosha ah oo ku jira akoon bangi) oo aan lahayn wax dambi ah.
20 wadan oo Yurub ah. Shuruudaha codsiga gaarka ah iyo shuruudaha waxay ku kala duwan yihiin Bilawga Yurub iyo Tusaha Visa-ga Ganacsiga / Nano Globals ee waddan ilaa waddan.
Qorshe ganacsi oo bilow ah oo cusub oo xaliya dhibaato kasta oo bulsho, dhaqaale ama deegaan. Haddii shirkadu aanay wali shaqayn, nooc ka mid ah alaabta ayaa loo baahan yahay. Haddii ganacsigu firfircoon yahay, tilmaamayaasha xaqiijinaya in adeegga ama badeecadu ay caan tahay. Khubarada waxay ugu yeeraan jiidashada.
Aynu falanqeynno shuruudaha gaarka ah ee qorshayaasha ganacsiga annaga oo adeegsanayna tusaalaha Latvia. Mashruucu waa inuu noqdaa Dal-ku-gal cusub oo Fiiso / Magnetic Latvia ah oo loogu talagalay suuqa dalka. Waa la jecel yahay in aan lagu mashquulin caasimadda, dawladu waxay rabtaa inay horumariso kaabayaasha magaalooyinka yaryar. Faa'iidada ayaa noqon doonta isku xirka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dekedda: waxaa la sameeyay aag dhaqaale oo gaar ah oo ku wareegsan labada dekadood, kuwaas oo muhiim u ah dowladda. Qorshaha ganacsi laftiisa waa inuu ku jiraa 15 bog iyo bandhig gaaban oo qeexaya codsadaha iyo mashruuca.
Sida loo helo a
Marka qorshaha ganacsigu diyaar yahay, waa in loo diraa hay'adda idman si ay dib u eegis ugu sameeyaan. Waddamo kala duwan bay kaga duwan tahay. Sidaa darteed, gudaha Latvia mashruuca waxaa lagu qiimeeyaa barnaamijka Incubation (INK) / Magnetic Latvia, mid ka mid ah 13 ganacsi oo la aqoonsan yahay. Ansixinta qorshaha ganacsiga ka dib, waxaad u baahan tahay inaad dukumentiyada u soo dirto qunsuliyadda ama xarunta fiisaha oo aad hesho ogolaanshaha joogitaanka muddo hal ilaa shan sano ah iyadoo ay suurtogal tahay in lagu kordhiyo.
2. fiisaha ardayga
Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay dhalinyarada.
Loogu talagalay ardayda ka qalinjabisay dugsiga dadka waaweyn, bachelors iyo masters. Codsaduhu waa in aanu lahayn diiwaan dembi.
Dhammaan wadamada Yurub. Laakin wadamada qaar, qofka ajnabiga ah waxaa laga yaabaa in uusan isku qorin barnaamij waxbarasho. Tusaale ahaan, gudaha Switzerland, kaliya dadka horey xaq ugu lahaa inay dalka joogaan (tusaale ahaan, fiisaha shaqada) waxay heli karaan Talo-bixinta Golaha Tacliinta Sare ee Ogolaanshaha Muwaadiniinta Ajaanibka ah ee Daraasaadka Caafimaadka ee Switzerland / Golaha Waxbarashada Sare waxbarashada caafimaadka.
Dukumeenti xaqiijinaya gelitaanka jaamacad shisheeye. Habkan lagu helo sharciga degenaanshaha, waxa ugu adag waa in la galo oo la helo lacag.
Waddamada Yurub intooda badan, waxbarashada sare waa lacag iyo qaali. Marka, si aad wax ugu barato Iswidhan, Finland, Danmark ama Nederlaan, waa inaad bixisaa Profiles Country / Komishanka Yurub 7 ilaa 25 kun oo Yuuro sanadkii (1-2 milyan rubles). Faransiiska iyo Belgium, waxaad ka heli kartaa fursadaha 5-7 kun oo Yuuro sannadkii (qiyaastii nus milyan rubles), iyo Poland, saddex kun oo Yuuro (250 kun oo rubles). Waxaa jira fursado bilaash ah, tusaale ahaan, Giriiga Shuruudaha Luuqadda / Waxbarasho ee Giriiga iyo Czech Republic Sida loo codsado / wax ku barto Jamhuuriyadda Czech, laakiin gelitaanka waxaad u baahan tahay inaad taqaan luqadda waddanka.
Si aad u bixiso kharashka waxbarashada, waxaad u baahan doontaa dhaqaale shakhsi oo muhiim ah, deeq waxbarasho ama deeq (hal mar lacag bixin ah). Kuwa dambe waxaa soo saara loo shaqeeyayaasha, aasaaska, jaamacadaha, dawladaha, wasaaradaha arrimaha dibadda ama waxbarashada, maamul goboleedyada. Macluumaadka ku saabsan kafaala-qaadayaasha suurtagalka ah waxaa laga heli karaa mareegaha jaamacadaha, ururada waxbarashada caalamiga ah iyo waaxaha dawladda.
Gelitaanka laftiisa, waxaad u baahan doontaa shahaado sare (ee shahaadada koowaad ee jaamacadda) ama tacliinta sare (duruusta qalin-jabinta iyo sare), faylalka, warqad dhiirigelin ah iyo shahaado xaqiijin doonta aqoonta luqadda qalaad. Isla dukumeenti la mid ah ayaa ku anfacaya marka la codsanayo deeq waxbarasho ama deeq.
Marka hore, waxaa habboon in la go'aamiyo dalka iyo jaamacadda, xajmiga deeqda waxbarasho ee loo baahan yahay iyo hababka loo helo kafaala-qaadka waxay ku xirnaan doontaa tan. Markaad dooranayso jaamacad, waxaad diirada saari kartaa kaliya maahan dookhyada shakhsi ahaaneed, laakiin sidoo kale waxaad diirada saari kartaa qiimeynta kala duwan, tusaale ahaan, QS World Rankings ama Qiimaynta Jaamacada Adduunka.
Habka gelitaanka laftiisa ayaa u ekaan doona wax sidan oo kale ah.
Diyaarinta dukumentiyada.Ma noqon doonto oo kaliya shahaado, laakiin sidoo kale warqad dhiirigelin leh oo leh faylalka. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ka sheegto naftaada iyo rabitaankaaga inaad jaamacad gasho. Midda labaad waxa ku jiri doona guulo, mashaariic, daabacaado cilmiyaysan iyo talooyinka macalimiinta iyo loo shaqeeyaha.
Gudbinta imtixaanada loo baahan yahay.Waa inaad xaqiijisaa aqoontaada luqadda qalaad, imtixaanka gaarka ah wuxuu ku xirnaan doonaa shuruudaha jaamacadda. Waxay u badan tahay, waxay noqon doontaa IELTS ama TOEFL Ingiriisi, DELF for Faransiis, Tijaabi DAF Jarmal ah. Barnaamijyada qaarkood waxay sidoo kale u baahan doonaan imtixaanno dheeraad ah. Tusaale ahaan, gelitaanka sharciga ee jaamacadaha UK, waxaad u baahan tahay inaad ku gudubto ma waxaan u baahanahay inaan u fadhiisto imtixaanka / imtixaanka LNAT LNAT.
Codsiga buuxintaWaxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso mareegaha hay'adda oo aad dukumentiyada ku shubto akoonkaaga gaarka ah.
Wareysi lala yeeshay wakiilka jaamacadda.Jaamacadaha qaar ayaa wareysiyo la yeesha musharaxiinta ay jecel yihiin ka hor inta aysan go'aan gaarin.
Dib u eegistu waxay caadi ahaan qaadataa hal usbuuc ilaa laba bilood.
Markaa waxaad codsan kartaa deeq waxbarasho ama deeq. Waxay u baahan doontaa dukumeenti la mid ah tan jaamacadda. Fursadaha lagu heli karo kaalmada dhaqaale waa la kordhiyaa haddii ay jiraan daabacaado cilmiyeed, shahaado sharaf, aqoon la xaqiijiyay oo luuqad qalaad iyo tixraacyo wanaagsan oo laga helayo macalimiinta iyo loo shaqeeyayaasha.
Kadib markaad hesho dukumeenti xaqiijinaya diiwaangelinta, waxaad ka dalban kartaa fiisaha qunsuliyada. Ogolaanshaha joogitaanka waxaa la bixiyaa hal sano, ka dibna dib loo cusbooneysiiyaa marka la soo bandhigo dukumeenti ku saabsan u gudubka koorsada soo socota.
Ardaydu waxay xaq u leeyihiin inay helaan shaqo waqti-dhiman ah iyo inay shaqeeyaan. Kadib markaad si guul leh u dhameysato tababarka, waxaad heli kartaa fiisaha qalin-jabinta. Waxay ku siinaysaa xaqa aad ku joogtid dalka sagaal bilood ilaa laba sano, raadsato shaqo ama aad samaysato ganacsi kuu gaar ah si loo kordhiyo sharciga deganaanshaha. Intaa ka dib, waxaad heli kartaa deganaansho rasmi ah iyo dhalasho.
3. Fiisaha dadka kartida leh
Waxay ujeedadeedu tahay in dalka loo keeno maskax.
Dadka kartidooda ama aqoontooda la aqoonsan yahay. Tusaale ahaan, saynisyahano, fannaaniin, jilayaal, qorayaal, naqshadeeyayaasha kuwaas oo caddayn kara in xirfadahooda aad loo qiimeeyo. Iyo, dabcan, ma haystaan ​​diiwaan dambi.
Gudaha Great Britain Codso fiisada Talent Global / GOV.UK (Talent Global) iyo France Hibada Caalamiga ah iyo soo jiidashada dhaqaalaha / website-ka rasmiga ah ee Xarunta Codsiga Visa ee Faransiiska (Talent Passport). Barnaamijka koowaad waxaa loogu talagalay in lagu helo dad karti leh, halka kan labaadna uu ku jiro qaybo kale, sida maalgashiga shirkadaha Faransiiska.
Caddeynta Documentary ee kartida. Kuwani waxay noqon karaan shahaado, magacaabis, shahaadooyin, maqaallo, duubista khudbadaha golayaasha, iyo wixii la mid ah. Dukumeentiyadu waa inay ahaadaan kuwo caalami ah ama si toos ah ula xiriira shirkadaha hogaaminaya Ruushka sida Yandex. Daabacaada, iyana, ma noqon karaan kuwo iskood u xayeysiiya, waa inay ahaadaan kuwo qof kale dib u eegis ku sameeyo shaqada codsadaha.
Intaa waxaa dheer, caddaynta noocan oo kale ah ma laha taariikhda dhicitaanka; qaar ka mid ah guulaha laga bilaabo bilawga xirfadda ayaa sidoo kale la bixin karaa. Inkasta oo, dabcan, ay fiicantahay in la muujiyo wax cusub, tusaale ahaan, 3-5 sano ee la soo dhaafay.
Aynu eegno tusaalaha UK, kaas oo barnaamijkani dabeecad ahaan ka cidhiidhsan yahay oo aan la xidhiidhin shaqada marka loo eego Faransiiska. Nidaamka oo dhan wuxuu qaataa shan bilood ilaa sanad.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad doorato mid ka mid ah labada qaybood: Hibada Gaarka ah ama Ballanqaadka Gaarka ah. Doorashada ugu horreysa waxay ku habboon tahay xirfadlayaasha khibradda leh ee wax qabanayay muddo dheer oo leh guulo badan. Midda labaad waa kuwa bilawga ah oo horey guulo waaweyn ka gaaray meelaha qaar, tusaale ahaan, waxay sameeyeen filim helay abaalmarinno caalami ah.
Markaa waxaad u baahan tahay inaad ururiso dhammaan dukumentiyada xaqiijin kara aqoonta, xirfadaha iyo guulaha. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa saddex warqadood oo talobixin ah si aad u codsato fiisaha. Waa inay ahaadaan kuwo ka socda Ingiriis ama urur caalami ah, ama dhalasho Ingiriis ah, oo daruuri ah khabiir si fiican looga yaqaan qaybaha qaarkood.
Dhammaan dukumeentiyada waa in lagu shubaa mareegaha GOV.UK oo arjiga waa in lagu buuxiyaa halkaas. Intaa ka dib, waxaa si toos ah loogu diraa Home Office of England iyo hay'adaha dawladda ee la aqoonsan yahay. Kuwa dambe waxaa loo qaybiyaa warshadaha. Guulaha sayniska waxaa lagu qiimeeyaa shaqada Boqortooyada Midowday sida cilmi-baare ama hogaamiye tacliimeed (Global Talent visa) / GOV.UK ee Akademiyada Ingiriiska, Royal Academy of Engineering iyo Royal Society of London, guulaha laga gaaray dhinaca farshaxanka Shaqada Boqortooyada Midowday (UK) oo hormuud u ah fanka iyo dhaqanka (Global Talent visa) / GOV.UK, Golaha Farshaxanka England, iyo dhanka teknoolojiyadda dhijitaalka ah Uga shaqee Boqortooyada Midowday hoggaamiye ahaan tignoolajiyada dhijitaalka ah (Visa Talent Global) / GOV.UK, Tech Qaran.
Kadib oggolaanshaha mid ka mid ah hay'adahan iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha, waxaad u qaadan kartaa dhammaan dukumeentiyada xarunta fiisaha oo aad sugi kartaa fiisaha. Ogolaanshaha joogitaanka waxaa la bixiyaa muddo hal ilaa shan sano ah marka uu doorto codsadaha iyada oo ay suurtogal tahay in la kordhiyo oo la helo deggenaansho rasmi ah.
4. fiisaha iskaa u shaqeysta
Waxay la mid tahay fiisaha bilowga, laakiin waxaa jira kala duwanaansho.
Shakhsiyaadka hal-abuurka leh ee leh khibrad guul leh oo ku saabsan abuurista iyo socodsiinta ganacsi yar. Tusaale ahaan, naqshadeeyayaasha, barnaamij-sameeyaha ama sawir qaadayaasha madax-bannaan.
Codsaduhu waa in aanu lahayn diiwaan dembi.
Nederlaan. Barnaamijyo la mid ah ayaa sidoo kale la heli karaa Iskaa u shaqeyste ama iskaa u shaqeyste / France Visa Center ee France, iyo fiisaha loogu talagalay kuwa xorta ah waxaa laga bixiyaa Estonia Estonia Digital Nomad Visa / Republic of Estonia, e-Residency iyo Germany Visa iskood u shaqeysi / Samee Jarmalka.
Ganacsi madaxbanaan oo guul leh oo leh daraasado kiis ee macaamiisha Nederlaan. Tani waxay noqon kartaa degel internet ah, sawir-qaadista astaanta, naqshadda summada, iyo wixii la mid ah.
Xaalad kale oo muhiim ah waa qorshe ganacsi oo si wanaagsan looga fakaray. Dhinaca kale, waa in ay soo bandhigtaa rajada ganacsi ee shirkadu leedahay iyo faa’iidada ay u leedahay dhaqaalaha dalka, isla markaana xaqiijiso kartidooda ganacsi. Dhanka kale, si loo muujiyo in ganacsiga la bilaabay uu bixin doono dakhli ku filan nolosha iyo shaqada Nederland. Tusaale ahaan, naqshadeeyuhu wuxuu sharxi karaa sida loo helo macaamiisha, tirada la qorsheeyay ee dalabaadka muddo cayiman iyo dakhliga ka soo gala iyaga.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ka codsato fiisaha gelitaanka iyo ogolaanshaha joogitaanka qunsuliyada Nederland ee St. Petersburg ama safaaradda Moscow oo aad soo gudbiso xogtaada biometric. Intaa ka dib, waxaad u baahan tahay inaad dukumentiyo iyo qorshe ganacsi u dirto Adeegga Socdaalka ee Nederland (IND) oo aad bixiso kharashka.
Qorshaha ganacsiga laftiisa waxaa lagu qiimeeyaa qofka iskii u shaqeysta / Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee Hay'adda Ganacsiga Nederland (RVO) iyadoo lagu saleynayo seddex shuruudood: rajada shirkadda, faa'iidooyinka dalka iyo khibradda abuuraha ganacsiga . Inta ugu badan ee aad dhalin karto waa 300 dhibcood, heerka ugu yar ee aad ku gudbi karto waa 90 wadarta dhibcaha oo dhan. Go'aanka kama dambaysta ah ee adeegga socdaalka inta badan wuxuu ku xiran yahay tirada dhibcaha.
Nidaamku wuxuu caadi ahaan qaataa 90 maalmood ilaa lix bilood. Haddii codsiga la oggolaado, ogolaanshaha joogitaanka ayaa la bixiyaa laba sano iyada oo xaq loo leeyahay in lagu kordhiyo muddadaas oo kale. Markaa waxaad hore u heli kartaa degenaansho rasmi ah iyo dhalasho.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, 4 siyaabood oo aad ugu guuri karto Yurub adoon kharash badan ku bixin!